Qaramada Midoobey oo gudi xaqiiqo raadin ah u direeysa tacaddiyada dalka Yaman – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaQaramada Midoobey oo gudi xaqiiqo raadin ah u direeysa tacaddiyada dalka Yaman
Qaramada Midoobey oo gudi xaqiiqo raadin ah u direeysa tacaddiyada dalka Yaman
Hiiraan Xog, Sep 30, 2017:- Qaramada Midoobey ayaa ogolaatay in dalka Yaman ay u dirto koox khubaro ah oo baaritaan ku soo sameeyo dambiyo dagaal iyo tacaddiyo kale oo la sheegay in laga geystay dalkaasi muddadii ay socotay colaadda sokeeye.
Golaha xaquuqul insaanka ee Qaramada Midoobey ayaa ansixiyay qaraar lagu yagleelayo koox khubaro ah oo magac ku leh caalamka.
Go’aankaasi ayaa ahaa mid dhexdhexaad ah oo ay isugu yimaadeen quwadaha reer galbeedka iyo waddamo carbeed oo sucuudigu uu ka mid yahay.
Xulufo uu Sucuudiga hoggaamiyo ayaa waxa ay taageerayaan ciidamada dowladda oo dagaal kula jira maleeshiyaadka Xuutiyiinta.
Sida ay sheegtay Qaramada Midoobey, tan iyo bishii Maajo ee sanadkii 2015-kii, in kabadan 8,530 oo qof oo u badan dad rayid ah ayaa lagu dilay duqeymaha cirka ah iyo dagaalada dhulka ka soconaya, waxaana sidoo kale ku dhaawacmay 48,800 oo qof oo kale.
Colaaddaasi ayaa sido kale waxa ay sababtay in dad gaaraya 20.7 milyan ay u baahdaan gargaar bani’aadannimo iyo in dalka uu ka dillaaco cudurka daacuunka oo soo ritay qiyaastii 700,000 oo qof tan iyo bishii April ee sanadkan.
Heshiiska hadda la gaaray ayaa dhigaya in khubaradaasi ay soo baaraan tacaddiyada ka dhanka ah xaquuqul insaanka iyo in la shaaciyo haybta ciddii geysatayba.
Waddamada reer Yurub iyo Canada ayaa iyagu soo jeediyay in la yagleeyo guddi xaqiiqo raadin ah oo ka tirsan Qaramada Midoobey oo tacaddiyadaasi u soo baara si qota dheer balse waddamada Carbeed ayaa arrintaasi ka biyo diiday, waxaana Sucuudigu uu ku hanjabay inuu xayiraado dhanka ganacsiga ah ku soo rogayo waddamada arrintaasi u ololeynaya.
Inkastoo lagu heshiiyay, go’aankan ayaa waxaa laga yaabaa inuu ka careysiiyo kooxaha xaquuqul insaanka, kuwaasi oo ku doodaya in dambiyo dagaal iyo tacaddiyo ka dhan ah aadanaha laga geysano gudaha dalkaasi, loona baahan yahay in dadka mas’uulka ka ah lagula xisaabtamo.
Wasiirka Caafimaadka ee dalka Mareykanka oo shaqadii iska casilay
Qaba qaabada xaflada furitaanka Saldhiga ciidamada dalka Turkiga oo ka socota magaalada Muqdisho